नेपाल आइडलका सुमितको पहिलो गीत ”समाचार” सार्वजनिक | Samacharpati नेपाल आइडलका सुमितको पहिलो गीत ”समाचार” सार्वजनिक – Samacharpati
काठमाडौँ, २० असार । नेपाल आइडलका गोल्डन माइक विजेता तथा दर्शकको मन जित्न सफल सुमित पाठकले आफ्नो पहिलो गीत ‘समाचार’ लिएर आएका छन् । नेपाल आइडलमा सहभागी भएपछि उनले गाएको पहिलो गीत हो ‘समाचार’ । काली प्रसाद बास्कोटाको शब्दर सङ्गीत रहेको गीतको भिडियो बिहीबार जी द्दज्ञ को अफिसियल युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको हो ।
जी द्दज्ञ डिजिटलको प्रस्तुति यस गीतसँगै सुमित एक वर्षको लागी यसै कम्पनीमा आबद्ध भएका छन् । जी द्दज्ञ आफैमा एउटा स्थापित कम्पनी रहेको र आफूलाई राम्रो गाइडेन्स मिल्ने, यसबाट अझै राम्रो काम गर्न सहज हुने भएकाले आफू आबद्ध भएको सुमितले बताएका छन् । साथमा जी द्दज्ञ ले पनि राम्रो कलाकारलाई बाहिर ल्याउन साथ दिनुपर्ने र आगामी दिनमा पनि यसै गरी साथ र सहयोग गर्ने लक्ष्यका साथ सुमितसँग सहकार्य गरेको जानकारी दिएको छ ।
‘सम्बन्धको पर्खाल’ को लिरिकल भिडियो सार्वजनिक(भिडियो सहित)
परम्परागत उपचारकर्मीको मापदण्ड तय,१५ वर्षदेखि कार्य गरिरहेकाले मात्र मान्यता पाउने
‘फटाह फणिन्द्रे’मा अभिनेत्री सुस्मा
दाँत हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ केटीको स्वभाब हेर्नुहोस भिडियो
के आत्महत्याको रोकथाम गर्न सकिन्छ ? डा.कमल गौतमले यस्तो भन्नुहुन्छ ! हेर्नुहोस भिडियो